I-TIDE: Ukusebenzisana, ukubandakanywa, ukuThunyelwa, uvelwano | Martech Zone
I-TIDE: Ukusebenzisana, ukubandakanywa, ukwabelwa abanye, uvelwano
NgoMvulo, Novemba 6, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Kudala ndifunda iincwadi ezimbalwa zamva nje (ngasekunene). Zombini ezi ncwadi zilungile iincwadi ukoyisa ezinye zezinto ezimbi zeshishini.
Eli lixesha lesibini ndifunda "Uthando yiKiller App". Kuya kufuneka ukuba ndiyifunde rhoqo kwiinyanga ezimbalwa. Ndiyathanda ukuyicinga njenge 'hippy' yeencwadi zeshishini. Inene ngokwakha ubudlelwane obukhulu nabo bantu bakungqongileyo. Ukukhathazeka ngabantu kuqala, emva koko akufuneki ukhathazeke ngeshishini lakho.
I-Silos, ezopolitiko kunye neeMfazwe zeTurf yincwadi ebalaseleyo. Kuyinyani malunga nokuphambukisa ingqwalaselo yabasebenzi bakho kude omnye komnye kwaye bagxile kwiinjongo ezifanayo zombutho.
Ndize nesam isibizo esibonisa zombini ezi ncwadi… TIDE
Ukusebenzisana -ukusebenza njengeqela kubonelela ngokuthenga kunye nokusebenza kakuhle. Ukuphelisa iinkqubo ezikhuthaza ukulwa kunye nezopolitiko. Abantu abangenakho ukusebenza kwiqela abajonganga nkampani, bayazikhangela. Ukuqesha nokukhuthaza abadlali beqela.
Ukubandakanywa-kubandakanya abathengi bakho (ngaphakathi nangaphandle) kuya kuhlala kuphucula umgangatho weemveliso kunye neenkonzo zakho.
Ukunikezela ngegunya-vumela iingcali oziqeshileyo ukuba zenze izigqibo kwaye zibaphendule.
Uvelwano - uqonde izithintelo zendlela, iindawo zentlungu, kunye nokusilela kwintlangano kwaye uvelane nabo bathengi kunye nabasebenzi ekufuneka bebanyamezele.
Imizuzwana emi-4 okanye iBust